Ndeipi apo Apple ichasunungura MacBook Pro itsva ye2017? Uye ndezvipi mitengo dzeUK, tech specs uye zvinhu zvitsva zvatinofanira kutarisira kubva kune itsva MacBook Pro 2017?
Mhando nyowani dzeMacBook Pro dzakaburitswa muna Gumiguru 2016, asi isu tave kutotarisira kumberi kune inotevera inovandudza yeMacBook Pro ye2017.Muchinyorwa chino tinokomberedza nekuongorora makuhwa ese ane chekuita neMacBook Pro 2017 nyowani - zuva rayo rekuburitsa , specs, dhizaini, pamwe mitengo uye zvitsva maficha.
Kana iwe uchifarira yazvino MacBook Pro yekuvandudza, isu zvakare tinokurukura izvo zviziviso uye nekuburitsa ruzivo kubva muna Gumiguru 2016, uye iwe unogona kuverenga zvimwe pano: New MacBook Pro 2016 kudzokorora.
Dzazvino kugadziridza: Ming-Chi Kuo fungidziro nezve 2017's Kaby Lake MacBook Pro mienzaniso.
Verenga zvinotevera: Mac kutenga mutungamiri | Best MacBook Pro cheap deals UK
New MacBook Pro 2017 release date, UK bei uye tech specs: UK kusunungurwa zuva
Tinotarisira Apple kuti ivandudze MacBook Pro line zvakare mu 2017, uye imwe nyanzvi yataura kuti kubudisa mashoma kweiyi itsva yakagadziridzwa MacBook Pro inotanga kupoteredza July 2017.
Nguva pfupi mushure mokunge 2016 MacBook Pro mitambo yakashumwa muna Gumiguru 2016, nyanzvi yekuremekedzwa yeApple Ming-Chi Kuo yakabudisa mushumo (Macrumors) kuratidza kuti kubudiswa kwe 2017 kuMacBook Pro mutsara kunounza mutengo wekucheka uye 32GB RAM sarudzo.
MunaJanuary 2017 Kuo akadzokorora zvaakafanotaura mune zvakanyanya mushumo mutsva, ino nguva inofanotaura kuti 2017 update ku MacBook Pro ingapinda mukugadzira mashekeri kutanga kwechitatu chechina (munaJuly, mune mamwe mazwi).
New MacBook Pro 2017 release date, UK bei uye tech specs: Specs
Ndezvipi zvakasimbiswa tech specs zvatinogona kutarisira mu 2017 MacBook Pro?
Kuwedzera kwepamusoro-mhara RAM kugoverwa ku32GB kunogona kuita pfungwa yakawanda (vazhinji vanoongororazve vanofunga kuti kuvhara MacBook Pro pa 16GB RAM inogumisa kukwidza kwayo pakati pevashandisi vayo zita rayo rinoreva kuti ndeyokuti), uye Kuo akafanotaura mberi kwekuvandudza uku munaOctober; asi Macrumors anonzwisisa kuti kugadziriswa kwekugadzira kwaizoita kuti izvi zviome.
"Kutsigira 32GB yekuyeuka kunoda kushandisa DDR ndangariro isiri simba rakaderera uye zvakare inoda dhizaini yakasiyana yeiyo logic board iyo inogona kuderedza nzvimbo yemabhatiri," anodaro Apple Phil Schiller. "Zvinhu zviviri izvi zvinoderedza hupenyu hwebhatiri."
Kaby Lake mapurisa
Asi pane dzimwe nzvimbo apo Apple angasarudza kuwedzera cheeky spec bump inotevera gore. Zvose zviri pachena ndeye mhuri yepurosesa.
Iyo 2016 MBP inouya nechitanhatu-chizvarwa Intel processors pane ino yegore yechinomwe-gen Kaby Lake chips, ayo achiri kubuda. Iwo machipisi anga asina kugadzirira munguva, inoenderana zvakakwana, asi zvingave zvakanaka kune avo vanotenga 'Pro' MacBook kuve nesarudzo yeavo vapurosesa vachangoburwa. Kana Apple ikadzokera kuPro muna2017, isu tinofunga kuti Kaby Lake mapurosesa achave ari pane menyu, pamwe nesarudzo yekutenga 32GB ye RAM. Uye aya ndiwo mafungiro akatsigirwa muMing-Chi Kuo's Ndira yekutsvagisa yaNdira.
Iyo nguva yekuvhurwa kweMacBook Pro muna2016 sezviri pachena yakaita kuti zviome - zvingangoita zvisingaite - kusanganisa ma processor eKaby Lake, nekuti zvaizoita sekuti chaiwo maKaby Lake machipisi angave akakodzera anga asati aburitswa. Asi izvo hazvicharatidzike semvumo chaiyo, sezvo Dell akadaro akadudza iyo Precision 5520 laptop, iyo inosanganisira Kaby Lake machipisi uye yakafanana chaizvo neMacBook Pro. Kana Dell akaisa maoko ake paKaby Lake - uye iyo 5520 inofanirwa kuvhurwa muna Kukadzi 2017 - saka hapana chikonzero nei Apple isingakwanise kuita zvakafanana.
New MacBook Pro 2017 release date, UK price and tech specs: 2016 MacBook Pro kubudisa tsanangudzo
Zvakawanda zve2017's MacBook Pro kugadzirisa. Asi chii chakaitika kune MacBook Pro mutsetse muna 2016?
Apple yakazivisa yakamirirwa kwenguva refu yekuvandudza kune yayo MacBook Pro malaptop pachiitiko muSan Francisco musi wa27 Gumiguru. Iwo malaptop, ese ari maviri 13in uye 15in, ane USB-C madoko uye neRetina inoratidzira, yakawanda-inobata Kubata Bar, inoratidzira mitsara inoratidzira iyo inotsiva iyo yekutiza, makiyi ekushanda uye makiyi emagetsi eakajairika qwerty keyboard. Tichatarisa zvese izvi mune zvakadzama muchinyorwa chino.
Pana 2 November, Phil Schiller (mukuru VP yekudhinda paApple) aiva vakabvunzurudzwa neThe Independent uye yakaratidza zvirongwa zvekambani uye maitiro kune chiziviso cheMacBook Pro. Pfungwa yakakosheswa yakamutswa mubvunzurudzo ndeyekuti Mac neIOS zvishandiso zvinogara zvakaparadzaniswa kubva kune imwe: iyo California-based kambani haizoyedze kubatanidza iwo maviri. Schiller anotaura zvakare nezve kubviswa kweiyo SD kadhi uye nei Apple yakasarudza kuchengeta iyo 3.5mm headphone jack.
Read more: MacBook Pro 2016 isiri kushanda: Ungagadzirisa sei MacBook Pro hardware matambudziko
Nyowani MacBook Pro 2016 dhizaini
Ino inguva yekutanga MacBook Pro kusasanganisira yakajairwa USB madoko (ndokuti, USB-A, iyo vhezheni yatakamboshandiswa isu), ine ese maviri mamodheru ane mana USB-C madoko ayo anoshanda seThunderbolt 3 chiteshi . Izvi zvinoreva kuti MacBook Air ikozvino ndiyo yega-yechizvarwa Apple laptop ine yakajairwa USB madoko. (Apple ichiri kutengesa mashoma MacBook mamodheru kubva kuchizvarwa chakapfuura, hazvo, kusanganisira 2015 MacBook Pro mamodheru ayo anoratidza ekare USB madoko: heino 2015 13-inch modhi, uye heino iyo 15-inch imwe.)
Ikopo, ndinoonga, musoro wechena pane itsva MacBook Pro. Iyo yakagadzirirwa yakawanda zvikuru yakafanana neyozvino 12in MacBook, Iyo iine USB-C uye imwe headphone jack senge yayo chete madoko - iyo Pro inongowana mashoma mashoma eayo USB-C madoko (ingave 2 kana 4, zvinoenderana nemhando ipi yaunoenda yako). Iyo MacBook Pro nyowani haichisina MagSafe kuchaja kana SD kadhi slot.
Zvakafanana ne12in MacBook, iyo MacBook Pro iye zvino ine butterfly mechanism keys, inobvumira kufamba shoma uye shomanana chisiki. Apple inoti iyi yechipiri-chizvarwa chehovekiti zvinoshandura kuvandudza ruzivo rwekunyora kubva ku 12in MacBook range.
Mhando ye13in ndeye 14.9mm yakareba, 17 muzana inopfuvura kudarika chizvarwa chakare, uye ivhu racho iri 23 muzana pasi. Inorema 1.36kg.
Mhando ye15in ndeye 15.5mm yakareba uye 20 yezana inopfuura muzana kupfuura chizvarwa chekupedzisira. Iyo inorema 1.81kg chete, iyo yakajeka zvikuru kune imwe 15in laptop. Apple yakawedzerawo yakakura Shingairira Kubata trackpad kune iyi shanduro.
Kuwedzeredzwa kwesimbi Apple logo pane iyo casing zvinoreva kuti iconic mwenje-up Apple logo haisisina kuverengerwa paMacBook Pro renji. Iyo 13in MacBook Air ikozvino ndiyo yekupedzisira yasara MacBook kuve nemwenje-up logo, kunze kwekunge iwe uchiverenga gore rapfuura MacBook Pro.
New MacBook Pro 2016 mamiriro matsva
Zvimiro-zvine hungwaru, iyo nyowani MacBook Pro ine imwechete mureza yekutengesa poindi yekutarisisa. Uye izvo…
Iyo Kubata Bhara pane yekumusoro-kumagumo MacBook Pro ndiko kuchinja kukuru kune iyo renji. Iyo yakasarudzika-strip-skrini iyo inobvumidza inonamira zvigunwe kutonga mune imwe software. Iyo inotsigira mitezo yekubata-yakawanda, iyo inobatsira kana pikicha yekugadzirisa kana kushandisa DJ kunyorera, kutumidza mashoma mienzaniso.
Kunyangwe iri kuchinja vhoriyamu yenziyo kana kutsvaira kugadzirisa imwe furemu yevhidhiyo muMovie, iyo Kubata Bar ndiyo nzira huru yevanogadzira kuti vagadzire nzira nyowani dzekudyidzana nemaapplication avo uye MacBook Pro seyakazara.
Kurumidza Rudzi mashandiro rakavakirwa mukati, richikubatsira kunyora nekukurumidza nezano rekufungidzira senge pa iPhone ne iPad. (Pfungwa dzako, nekuti mazano ekufanotaura ari pazasi peziso rako, vakaratidza kushoma-mushandisi kupfuura zvakaenzana pane nhare. Iyo yakanaka pakunyora ndeyekutarisa pachiratidziri, kwete kuti utarise pasi nguva dzose zvemota -akakwana mazano.)
Bhari inogadzirisawo sensor inonzi Touch ID, ichiita MacBook Pro yechitatu Apple product line line mushure me iPhone ne iPad kuisa teknolojia. Nekuita mari yakachengeteka, chipukisi cheApple T1 mukati memakiti MacBook Pro chinochengetedza zvakachengetedzwa zveTaint ID dzekubhadhara pamwe nekushandura mawebsite. Verenga zvakawanda nezve Apple Pay mubhuku redu rakazara: Complete guide kuna Apple Pay UK.
The Touch Bar inogadzirisa, uye iwe unogona kudhura uye kudhonza mirairo yakasarudzwa / inoshanda mubharu, zvimwe saiyo iwe unodhonza zvidhori zvemapurogiramu mumatokari kuMac kana iPhone.
Nokuda kweizvi, tarisa mutungamiri wedu kuTrack Bar: Nzira yekushandisa nayo Touch Bar pane itsva MacBook Pro | Bhuku reKubata Bhu. Uye kana iwe uchida kutora imwe yekubata Bar chiito pane mamwe maMac, uverenge yedu Apple keyboard neTapu Bar rinobudiswa zuva runyerekupe uye Nzira yekutora Touch Bar pane chero Mac.
New MacBook Pro 2016 tech specs nekushanda
Apple inoti zviratidzo zveMacBook Pro zvitsva zvinodarika 67 muzana, ine 67 yepamusoro yepamusoro yehutano hwakasiyana uye inoratidza 25 muzana kune rumwe ruvara kupfuura chizvarwa chekare chakafanana.
Iyo 15in MacBook Pro inouya nechizvarwa chechitanhatu Intel Core i7 quad-core processor - saka hapana chiratidzo cheiyo yechinomwe-gen Kaby Lake chips, sezvakanga zvakaita (zvichida pane tariro) runyerekupe. A Radeon Pro mifananidzo kadhi rakagara mukati, tarisiro, zvakanyanya kuchinjwa kutamba mitambo.
Mukuenzanisa, mhando duku ye13in inotengeswa pamwe chete neCore i5 kana i7 zvichienderana nezvamunoda, neIndel Iris mifananidzo uye yakasimba-SSD yekuchengetedza.
Izvo zvakagadzirirwa mumapikicha zvinopikira kaviri hutambo hukuru hwemutauro mukuenzanisa nezera rekupedzisira.
New MacBook Pro 2016 UK release date
Zvose zvitsva zveMacBook Pro 2016 zvinowanikwa kuti zvironge zvino.
Imwe MacBook Pro neT Touch Bar ichaendesa kuUk muvhiki ye3-4, zvinoenderana webhusaiti yeApple, pasinei neApple vachitora mavhiki e2-3 mukutsvaga kwayo. Izvi zvingangodaro nguva dzekutumira dzeUnited States dzekutanga kutangira mairairo.
Iyo isiri-Touch Bar MacBook Pro achatumira pakarepo. Tinotarisira kuti zvitoro zveApple muUK zvive nazvo, asi kana uchida kutenga, zvingave zvakakodzera kudana chitoro chako chemuno kutanga kutarisa masheya emasheya.
New MacBook Pro 2016 UK mitengo
Zvose zviri zviviri 13in uye 15in itsva MacBook Pro mitatu zviripo kutenga ikozvino. UK pricing inotanga pa £ 1,749 nokuda kweMacBook Pro itsva neT Touch Bar, uye inotanga pa $ 2,399 / £ 2,349 yemuenzaniso we15in. MacBook Pro inodhura zvikuru inodhura £ 2,699. Vachanotakura mumavhiki e2-3.
Apple yakazivisawo shanduro ye MacBook Pro isina A Touch Bar iyo ine tsika yemasikirwo masikati uye 2 USB-C ports iyo yakagadzirirwa kutora 13in MacBook Air mumutsara-up. Izvi zvinodhura kubva ku $ 1,499 / £ 1,449, zvinoreva kuti Apple inofarira iyo Touch Bar uye mbiri mbiri-USB-C pa £ 300.
Vose mienzaniso vari inowanikwa muSirivha uye Space Grey uye ngarava neyekupedzisira Mac operating system, macOS Sierra.
Aya matengo akakwirira, kuti ataure zvakajeka, uye anomiririra kuwedzera kwekutengesa kwemazuva ano kwezvinhu zvakangofanana zveMicrosoft, zvichida sechikonzero chechirevo cheBrxit-chichienderana nemari. (Nokuwedzera pane izvozvo, onai Mutengo weApp unokwira UK.)
Zvisinei! Iwe unogona kuwana mishonga pamutengo wakaderera kana iwe ukatengesa (uye ona kuti iwe unonamatira kune vanotendesa vanotengesa). Nokuda kwezvitsva zvedu zvezvinhu zvakanakisisa zveMacBook Pros, tarisai Best MacBook inobata UK.
Macworld podcast: Apple's 27 Oct kuvhura chiitiko
Iyo UK Tech Weekly Podcast timu inokurukura Apple ya27 Gumiguru kumisikidza chiitiko, kusanganisira iyo nyowani MacBook Pro, muchikamu 38, yakamisikidzwa pazasi.
UK Tech Weekly Podcast inouya musi weChishanu. Tevera timu pa Twitter kuti vawane zviziviso zvezvikamu zvitsva.
New MacBook Pro 2016 kutanga: Verenga chiitiko chinogara blog
Isu takararama-blogged iyo yese Apple chiitiko, uye iyo MacBook Pro ndiyo yainyanya kukwezva. Tarisa uone pazasi kune zvese ruzivo kubva mukutanga. Uye tendeukira kune rinotevera peji rechinyorwa ichi kune ese edu pre-chiitiko fungidziro uye fungidziro - ona kuwanda kwatakaita!
16in MacBook Pro 2021: Zvese zvatinoziva nezveMacBook Pro 16in
Nyowani MacBook Pro 2021 zuva rekuburitsa, 14in kugadzirisazve, mutengo & specs
Apple M1-powered 13-inch Macbook Pro vs Macbook Mhepo: Ndeupi wakanakira iwe?
Kaby Lake Intel Core processor: 7th- uye 8th-gen CPU nhau, maficha uye zuva rekuburitsa
Mutsva MacBook 2020 zuva rekuburitsa, mutengo & specs runyerekupe
Filed Under: New MacBook